Ivenkile yokuFezekisa uMyalelo, i-Ecommerce Order Order Dropshipping-Sunson
Isisombululo sokugcwalisa kunye nokushiya
iinyanga ezi-3 zokugcina simahla ziqala ukusebenzisa inkonzo yethu
uvavanyo lwasimahla iipasile ezi-2 zomthengi omtsha
Bhalisela Simahla →
Khetha kwaye upakishe
Ukuthunyelwa kwihlabathi liphela
Sinikezela abathengi bethu ngeyona ndlela intle kwi-eCommerce order ukuze bazalisekiswe ukusuka e-China kuye kwihlabathi liphela…
Ukuzalisekiswa kungaphezulu kokuthumela iiodolo kubathengi bakho. Imalunga nokwenza iklasi yokuqala yamava okuthenga ashiya umbono ongapheliyo, oqinisekisa ukuba abathengi bakho bahlala bebuya be-odola amaxesha ngamaxesha.
Yakho Ethembekileyo Warehouse & Order Ukuzaliseka Partner e China.
Iqela lethu lobuchule kunye nesoftware yokufezekisa ekrelekrele.
Njengenkampani ehamba phambili kwezobuchwephesha eTshayina, uSunson ungumnikazi weSenzhen Fulfillment Centre kunye neGuangzhou Fulfillment Centre, usebenzisa isoftware efanelekileyo ukubonelela ngokulula nangokuthembekileyo ukuzaliseka komyalelo kumashishini e-ecommerce, shopify, Woo-commerce, urhwebo olukhulu, iAmazon, i-Ebay, umnqweno, njl.
USunson uzibophelele ekuboneleleni ngendawo ekhuselekileyo, ukuzaliseka okukuko, iindlela ezahlukeneyo zokupakisha, izisombululo zokuhambisa eziguqukayo kunye nezinye iinkonzo ezongezwe ngexabiso ukukunceda ukuphucula ishishini lakho ngexesha nangemali encinci.
Inkonzo yokuhambisa ngenqanawa
Inkonzo yokuthumela umhlaba wonke
28 Umhla wama-2020
Ivenkile yokuTshintsha uMdlalo we-eCommerce
Umtshintshi womdlalo kwihlabathi le-eCommerce, ayikho enye ngaphandle kweqonga lokuthenga. Ngokusisiseko, iapps yokuthenga iyiphakheji yamava onke okuthenga oku mobile, oko kukuthi, ukufumanisa, ukuhlawula, kunye nokuhanjiswa kwisicelo esinye. Abasebenzisi bangena kwi-imeyile nge-imeyile, belandela iShopi eyahlukileyo ...
UngaluPhucula njani uLwazi loMsebenzisi kwiWebhusayithi yakho ye-E-Commerce
Xa kuziwa kwiwebhusayithi yakho ye-e-yorhwebo, ukubonelela ngamava omsebenzisi olungileyo (i-UX) kuthatha okungaphezulu kunoyilo olujongeka kakuhle. Kubandakanya izinto ezininzi, zonke zisebenza kunye, ukunceda abantu abahamba kule ndawo bajikeleze kwaye bafumane into abayifunayo. Ukusuka kwiinkcukacha zemveliso ukuya ...
Qala iintsuku ezingama-90 Simahla
Ngolwazi oluthe kratya, nceda ungene okanye ubhalise kwezi ndawo zilandelayo.